Lixabiso nasekuqiniseni iinxalenye carbon sentsimbi mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Isinyithi seCarbon sisinyithi sekhabhoni esinomxholo wekhabhoni oyi-0.0218% ukuya kwi-2.11%. Ikwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni. Ngokubanzi, ikwaqulathe inani elincinci lesilicon, i-manganese, isalfure, kunye ne-phosphorus. Ngokubanzi, ukuphakama komxholo wekhabhoni yentsimbi yentsimbi, kokukhona ubukhulu kunye nobukhulu bokuqina kwamandla, kodwa isezantsi seplastikhi. Intsimbi yeCarbon yentsimbi yentsimbi isetyenziswa ngokubanzi kwaye ilungele uninzi lwamacandelo oomatshini.
Isinyithi seCarbon ekwakheni ngokuthe ngqo iziseko zekhabhoni zentsimbi
I-Ouzhan iya kulungisa ngokufanelekileyo iindawo zoomatshini ngokwemizobo yakho kunye neemfuno zakho. UKWAKHA yindlela yokuqhubekeka esebenzisa nasekuqiniseni oomatshini ukusebenzisa uxinzelelo izithuba zesinyithi ukuvelisa deformation zeplastiki ukufumana forgings kunye iipropati ezithile ngoomatshini, iimilo ezithile kunye nobukhulu. UKWAKHA (UKWENZA NOKUXOVA) yenye yezinto ezimbini eziphambili. Nasekuqiniseni imveliso yenye yeendlela eziphambili processing ukubonelela ngoomatshini iindawo ezingenanto kushishino lokuvelisa oomatshini. Ngokuqiniswa, ayizukufunyanwa kuphela imilo yamalungu oomatshini, kodwa kunye nolwakhiwo lwangaphakathi lwesinyithi lunokuphuculwa, kunye neempawu zoomatshini kunye nezinto ezibonakalayo zesinyithi ezinokuphuculwa. Ngokubanzi, ezona ndawo zibalulekileyo zoomatshini ezinexinzelelo oluphezulu kunye neemfuno eziphezulu zenziwa ngokuqulunqa iindlela zemveliso. Izinto ezibalulekileyo ezinje nge-shafts generator shafts, iirotor, izixhobo zokufakelwa, iincakuba, iiringi zokugada, iikholamu ezinkulu zoxinzelelo lwamanzi, iisilinda zoxinzelelo oluphezulu, ukuqengqeleka kweendawo zokugaya, ii-crankshafts zangaphakathi zomlilo, iintonga zokudibanisa, iigiya, iibheringi, kunye nemipu kwishishini lezokhuseleko yonke imveliso yomgunyathi.
Izinto eziluncedo ze carbon zentsimbi iinxalenye
-Ukuqinisekisa ukuqhubeka kombutho wentsimbi
-Uphucule iipropathi ezibonakalayo zesinyithi
-Phucula iiplastiki kunye neepropathi zoomatshini zesinyithi
Inkonzo ekwenziweyo yeKhabhoni yentsimbi ekhawulezileyo-China Shanghai CNC intsimbi yentsimbi eyenziweyo yomvelisi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, inokuqhubekisa ikhabhoni ngentsimbi ezinzileyo kunye nethembekileyo yokuchaneka okuphezulu kwe-CNC. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike.
Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwentsimbi yentsimbi ekwakheni iinxalenye zomatshini. Ukongeza, i-CNC yakha iimveliso zekhabhoni zentsimbi ebonelelwa ngokungqongqo kwimigangatho esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana ngexabiso lekhabhoni yentsimbi ye-CNC yokwenza iimveliso kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Ouzhan carbon intsimbi zakha iindawo processing iindawo eziluncedo
(1) UKWAKHA efanelekileyo ukuqhubekekisa imiphezulu eyahlukeneyo ngaphakathi nangaphandle ejikelezayo. Uluhlu olwenziweyo olwenziweyo lokuchaneka kwe-zhiIT13, i-IT6, kwaye ubukhulu bomgangatho weRa ngu-12.5, 1.6.
(2) Isixhobo sokujika sinesakhiwo esilula kunye nokuveliswa okulula, okulungele ukhetho olufanelekileyo lwezixhobo kunye nejometri yejiyometri ngokweemfuno zokuqhutywa. Kukwalula ngakumbi ukulola kunye nokudibanisa kunye nokudibanisa izixhobo zokujika.
(3) UKWAKHA has bhetyebhetye olomeleleyo isakhiwo, izinto, ibhetshi imveliso, njl workpiece, kwaye isetyenziswa ngokubanzi. Ukongeza ekwenzeni izinto ezahlukeneyo zentsimbi, i-cast iron, kunye ne-non-ferrous metals, inokwenza kwakhona izinto ezingezizo zesinyithi ezifana ne-fiberglass, i-bakelite, i-nylon njalo njalo. Kwezinye izinyithi ezingenazintsimbi ezingakulungelanga ukugaya, izixhobo zokujika idayimane zingasetyenziselwa ukwenza okuthe tye, okunokufumana ukuchaneka okuphezulu koomatshini kunye nexabiso elincinci loburhabaxa.
(4) Ngaphandle komda ongalinganiyo womhlaba ongenanto, uninzi lokuxolelwa kukusika okuqhubekayo kunye necandelo lomnqamlezo olulinganayo. Ke ngoko, amandla okusika atshintsha kancinci, inkqubo yokusika izinzile, efanelekile ukusika ngesantya esiphezulu kunye nokusika okunamandla, kwaye inemveliso ephezulu yokusebenza.
Izinto eziluncedo ze-Ouzhan Carbon nasekuqiniseni inkonzo
-Zonke izinto ezichanekileyo ze-CNC ezenziwe ngentsimbi ye-carbon zixhomekeke ekuhlolweni okungqongqo komgangatho.
-Inkonzo ye-OEM ekhawulezayo inokuqinisekisa ukuba ufumana iimveliso ezinqwenelekayo, inkxaso ye-DDP, i-CIF, i-FOB kunye nezinye iindlela zothutho zokuqinisekisa ukuba abathengi banokuzifumana iimpahla ngokukhuselekileyo.
-Ngokweemizobo okanye iisampulu zokwenza ngokuchanekileyo iinxalenye zekhabhoni zentsimbi.
Egqithileyo I-OEM eshushu yokuDala iiNxalenye
Okulandelayo: Elungiselelweyo carbon intsimbi zakha iinxalenye